musha OCEANIA FOOTBALL STORI Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yebhokisi yebhokisi inonyatsozivikanwa neNickname; 'Harry Kool'. Our Harry Kewell Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Harry Kewell akanga ari mumwe munhu asina kumbobvira awana simba rake rakazara richienzaniswa neanofarira ye Lionel Messi uye C. Ronaldo. Iwe, iye waiva chiratidzo chakakosha chokusimudzirwa kweAustralia pamusangano wepasi rose. Iye zvino kunze kwekuwedzera mberi, ita kuti utange.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Upenyu Hwekutanga
Kewell akaberekwa pa 22 September 1978 muSydney kune baba veChirungu, Rod Kewell uye amai veAustralia, Helen Kewell. Harry akakurira achitsigira Liverpool muChirungu yeChirungu yeChirungu. Yaiva Liverpool iyo yakamuita kuti afarire zvebhola.
Akagamuchira chikoro chake chekutanga kuSmithfield Public School uye chikoro chesekondari kuSt. Johns Park High School vasati vatumirwa kuWestfield Sports High School. Munguva yake panguva yeWestfields Sports High School, Kewell akambomira pamakwikwi emakwikwi maviri echikoro nekambani.
Pazera remakore 15, Harry akanga atova zita remhuri mubhola reAustralia. Izvi ndizvo apo vakawanda vakatanga kumuda. Iyi ndiyo yaiva iyo zita rezita rekudaidzwa 'Harry Kool', akauya. Munhu wose akamucherechedza kuti akure kuti ave mutambi wehope dzavo.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Upenyu hweMhuri
Harry Kewell akaberekerwa nababa veChirungu Rod Kewell uye amai veAustralia Hellen Kewell. Anovadzivirira kubva kune vhidhiyo sezvo pasina ruzivo pamusoro pavo paIndaneti. Vanorarama muSydney sezvavanenge vachinyora.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-ukama
Harry akaroora mudzimai wechikadzi. Yaro haina imwe kunze kweBritish soap opera muchengeti Sheree Murphy. Sheree Victoria Murphy akazvarwa 22 August 1975 mu Stoke Newington, kuchamhembe kweLondon. Ndiye mwana ari pakati uye musikana chete mumhuri yevana vashanu.
Akasangana ndokudanana naHarry Kewell pane ainzi Majestyk nightclub muLeeds, gore 2000. Mushure mekunge vafambidzana nemakore gumi nemana, bato rose rakasunga kusunga pfumo. Vakaroorana muLas Vegas muna May 3.
Harry naSheree vane vana vana pamwechete, vanasikana vatatu nemwanakomana mumwe chete. Dolly akaberekwa 14 January 2012, Ruby akaberekwa musi we 17th June 2003 apo Matilda akaberekwa pa 19th yaMarch, 2008 uye Taylor (mwanakomana) akazvarwa 2001.
Ndiye mutambi wechiChirungu uye muterevhizheni, anonyanya kuzivikanwa nemabasa ake saTrcia Dingle muItv soap opera Emmerdale and Eva Simba muChinema 4 soap opera zvechokwadi anoda murume wake. Vanowanzoonekwa vachirembera kunze uye vachiona tennis refu nemitambo yemutambo.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Nyaya neAgent
Akafambisa mumiririri wekudaidzira mukutanga kwe2013 mushure mekubva kwaari asina tambo. Vasati vaita chisarudzo, vazhinji vakataura kwavari sevari kuve neAustralia inonyanya kukosha-mutungamiri hukama mumitambo yeAustralia. Nzira dzavo dzekuparadzanisa dzakashamisa vazhinji vaivaziva.
"Ndinoshuva Harry iyo yakanakisisa yeramangwana mune ramangwana uye zvakave zvichifadza kushanda naye," Mandic akati kubva kuParis. Kuparadzana kunoratidzika kunge kunofadza, kunyange zvazvo zvinotendwa kuti vaviri vacho havana kubvumirana pamusoro peKewel's future direction.
A Chokwadi chinoshamisa pamusoro paHarry Kewell ndizvo, akave akatumidzwa saiye "Buyucu Harry" mumutauro weTurkey zvinoreva "Harry the Wizard". Iri zita rezita rakadudzirwa kubva kuna Harry Potter. Apo vamwe vevamwe vaimhanya navo vakamudana Oz Buyucusu mumutauro weTurkey unoreva Wizard yeOz.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Football Career
Akaita muNew South Wales Youth League iyo inomiririra pasi-13 kusvika pasi-15 Marconi Stallions mauto, akabatanidzwa naStephen Treloar, paanenge achienda kune dzimwe dzidzo dzakananga ne NSW Junior Soccer Academy, yakadzidziswa naDavid Lee.
Pazera remakore 14, Kewell akaenda kuThailand, Italy neEngland pamwe chete neMacconi aibudirira pasi pe-14 team yakanga ichangobva kutora mazita ehurumende. Vakatamba mitambo vachirwisana nejunior team Milan, pamwe nemativi ekudzidzira muEngland. Iyi ndiyo nguva yokutanga Kewell akanga asiri kunze kwenyika asi akamupa kugamuchira kwake kwekutanga kwebhola muEurope, uye zvakare akapinda musangano weLigeria League kwenguva yekutanga semutarisiri. Pazera remakore 15, Kewell akapiwa mukana wekudzokera kudzokera kuEngland uye kuedzwa naye Premiership football club Leeds United kwemavhiki mana sechikamu cheBig Brother Movement muAustralia. Kewell akaenda kuEngland neramangwana rake Socceroo teammate Brett Emerton. Vose vakabudirira munguva yavo miedzo kuLeeds, asi Kewell chete ndiye akakwanisa kutora chikwata chechikwata nekuda kwechizvarwa cheChirungu chababa vake, icho chakagutsa zvido zvevisa.
Kewell akatumidzwa zita rokuti PFA Young Player yegore mugore re 2000 uye akawana 63 zvinangwa mumasangano e242 yeLeeds vasati vasangana neLiverpool mu2003.
Kewell akatenda Leeds United nekumupa mukana weEnglish Premier League powerhouse Liverpool uko akakunda UEFA Champions League mu2005 uye FA Cup mu2006. Akapedzisa basa rake paGalatasaray muTurkey, Qatar uye munharaunda yeAustralia.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Mutungamiri weMabasa
Uyu aimbova Leeds naLiverpool nyota ainzi mutevedzeri weLigi Two Crawley Town. Izvi zvakaitika muna May, 2017. Vakawanda vanotenda kuti iri danho rake rokutanga mukugadzirisa.
Mishumo inoratidza kuti saMay, 2017, Harry aive achishanda paEFAFA Pro License kudzidzira kukwanisa uye akatsigirwa naWarren Feeney, aimbova murwi weNorthern Ireland. Izvi nokureva zvinoreva kuti rimwe zuva aizodzidzisa mutambo we UEFA Champions League. Ramangwana rakajeka uye rakabatwa naHarry.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Mutsva weAlex Tobin Medal
A chaizvo Chokwadi chinofadza chaHarry Kewell ndiye, iye ndiye anokunda Alex Tobin Medal. Uyu mushonga unofungidzirwa kuva chikamu chakakurumbira kune chero mupi weAustralia webhokisi kuti akunde.
Akagamuchira mubairo uyu mushure mekuzivisa kwekurega kwake semutambo mugore ra 2016.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Muduku Mutsva kusvika pakutanga kweNational Team
Chimwe chiitiko chinoshamisa pamusoro pake ndechokuti, ane hutori hwekuve mutambi wechidiki kudana Australia mumitambo yenyika dzakawanda. Kunyangwe pazera remakore e17 nemwedzi ye7 yakarwisana neChile ndokutora kukudzwa uku.
Kewell ndiye aiva muduku kuna Socceroos-akambotanga paaifamba kuAustralia mu1996 achipikisana neChile pazera remakore 17 nemwedzi minomwe.
Akabva kune izvo dzakawanda dzinonzi chizvarwa cheAustralia chinomuka. Zvakanaka, Harry Kewell aiva murume anotungamirira wechizvarwa ichi.
Izvo zvinokwidziridzwa zvakayerera mudiki weAustralia. Akanga ari muchechi wechidiki weChirungu PFA wegore mugore ra 1999-2000 uye akatumidzwa muboka rePFA regore.
Pamwe chete neSoceroo pamwe naye Mark Viduka, Kewell akakwira chikwata chechikepe chekudzikamisa neLeeds United. Dzimwe nguva vaive iyo Premier League inonyanya kuparadza kaviri, kutora Leeds kumatenga ekuzorora kweEFAFA Championship semi-final mu2000-01. Pamberi pechitsiko chekubudirira, Leeds akazvipedza pachake mukuparadzwa mukutsvaka kubwinya. Kubuda kwaKewel kubva mubhuki ichiri chigadziko chakazaruka muYorkshire. Hapana ainge azadza nzvimbo yake kusvikira zuva.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Zvakanaka Kutarisa
Kunyange mudzimai wake Sheree Murphy akareurura kuti imba yake naHarry haisi nguva dzose iri nyore kufamba nechikepe.
Uyu muongorori wechechi akaratidza kuti munguva yakapfuura, vakadzi vaizopwanya zvakashata pamurume wavo akanaka pamberi pake, vachitungamirira kumiganhu pakati pake naHarry's vanokuvadza vanofarira.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-2nd Australian Kukunda Mutambo Wekufananidza paNyika Yenyika
Chimwe chinhu chinoshamisa pamusoro pake ndechekuti, iye chete wechipiri weAustralia mutambi wechikwata kuti atore Munhu weMutambo Mutambo paMutambo weWorld Cup.
Muchikwata chakakodzera paanenge achitamba neCroatia akawana pa79th maminiti akaenzana nemakato ayo aidiwa neAustralia kuti apinde muchikamu chinotevera chetambo.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Oceania Mutambi wegore
Chinhu chinoshamisa kwazvo pamusoro pake ndechokuti, ndiye mukundi weOceania Footballer of the Year Award.
Uyu mubairo unofungidzirwa kuti ndeimwe yemitambo yakatarwa zvikuru mumutambo webhola. Kunyangwe zvinonakidza ndezvekuti akakunda mubairo uyu katatu mubasa rake. Kwemakore akatora mubairo uyu anosanganisira 1999, 2001 uye 2003.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Kukuvadzwa-Basa Rinotungamirirwa
Asi chokwadi chinosuruvarisa ndechekuti kunze kwemahombekombe aya, Kewell angadaro akaisa nhovo dzake musi waakasiya Leeds mu2003.
Kubudirira kwekukuvadzwa kwakakonzera basa rake kwakaita kuti vakawanda vamuidze- muchengeti anovimbiswa zvikuru akambobudiswa neAustralia asina kumborarama world class billing.
Harry Kewell akabudiswa sechikamu chemotokari yekutengesa moto mushure mekuregererwa. Akabatanidza neLiverpool asi akazovhiringidzwa nekukuvara kwekutsvaga, asingamboregi zvikomo zvakange zvambotungamirira kune imwe mvumo ye £ 20 + mamiriyoni kubva kuInter Milan.
IAustralia yakadzika kubva kune vose veMichampions League yekupedzisira mu2005 uye FA Cup showpiece gore rakatevera; iyo yekupedzisira yakakuvara, yakabvaruka musungo weguruva, yakachengetedza Kewell kusungirirwa kweinenge gore. Akamutsa basa rake muhombe yeTurkey yaGalatasaray, asi akaenderera mberi akadzivirirwa nehutano hwehutano. Akarasikirwa nemakore matatu nehafu ebasa rake paLiverpool nekuda kwekukuvara.
Harry Kewell's (Bernie Mandic) vashandi vambotumidza Liverpool "kunyadziswa" uye vanoti kusakwanisa kwavo kwakaparadza basa rayo mutambi.